RayTube VIDEOS : Lahatsary fiaran-dalamby, Lahatsary fiaran-dalamby haingam-pandeha, horonantsary TCDD, Tram Video
Kamiao iray nandeha kamiaobe tao Mersin nanidina ny lamasinina tao anaty tetezana. Raha nidina tamina fiaran-dalamby in-4-5 kosa ity kamiaobe ity, dia naratra mafy tamin'ilay loza ny mpamily Rosiana. Raha ny vaovao voaray dia hatrany ny loza [More ...]
Nambara fa hanomboka ny 28 mey ny sidina YHT. Ny Republic of Turkey State Railways (TCDD) fitaterana A.Ş. ankafizin'ny trano ao Life (HPP) miaraka amin'ny kaody, ny High Speed ​​Train (YHT) dia nizara lahateny lahatsary momba ny fomba hahazoana ireo tapakila. olom-pirenena, [More ...]
Miorina ao Adapazari, Sakarya Turkey Wagon Industry Co. Ny lamasinina herinaratra nasionaly izay novokarina tao amin'ny Fitaovana (TÜVASAŞ) dia hiatrika ny Président Recep Tayyip Erdoğan avy ao Ankara amin'ny tsingerintaona faha-29 ny fandresena an'i Istanbul, izay hankalazaina amin'ny 567 Mey. [More ...]
Fotoam-pandrindrana ny Rail ao Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro Line, ny fananganana izay nanomboka tamin'ny taona 2016, dia natao niaraka tamin'ny fandraisana anjaran'ny Ekrem İmamoğlu, ny lehiben'ny Kaomin Metropolitan Istanbul (İBB) ary ny birao monisipaly. Ataköy - [More ...]
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. T-129 ATAK Helikoptera fanitsiana sy Tactical Reconnaissance Helikoptera, novolavolain'i (TUSAŞ), dia nanao sidina manokana hatramin'ny 19 May, Fahatsiarovana ny Atatürk, Tanora sy Fanatanjahantena. Tiorka avaratra sy [More ...]
Na eo aza ny fihoaram-peo ratsy sy tsy fahatokisana vokatry ny fihanaky ny virus corona (COVID-19) maneran-tany, ny ASELSAN dia manohy ny asany ao anatin'ny tontolon'ny fepetra tsy misy fanelingelenana ao amin'ny rojo famokarana sy famatsiana. Fiara "Hassa Optik" an'i ASELSAN ao Sivas [More ...]
Nanambara ny Minisiteran'ny Fiarovana NATIONAL fa bala sy fitaovam-pivelomana an'ny fikambanana mpampihorohoro PKK dia nalaina tany Cukurca sy Haftanin, avaratr'i Irak. Ao anatin'ny fanambarana nataon'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena; “Nataon'ny talen'ny Hero Commandon anay [More ...]
Sarintanin'i Marmaray sy Gebze Halkalı Marmaray Stops sy fandaharam-potoana: Marmaray, ilay tetikasa mampifandray ny lafiny Eropeana sy Azia ao Istanbul Halkalı ary ny fijanonan'ny metro Gebze ary mijanona. [More ...]
KARAYEL Tactical UAV System no fiaramanidina voalohany sy tokana Tactical Unmanned fiaramanidina novolavolaina sy namboarina mifanaraka amin'ny fenitra fenon'ny fenitra "Airworthiness in Civil Airspace 'an'ny OTAN-4671. KARAYEL rafitra, tsirairay avy [More ...]
Ny prototype faharoa an'ny AKINCI Offensive Unmanned Vehicle Aerial (TİHA), novolavolain'ny injeniera Baykar Defense ary mitohy ny fizotran'ny famokarana, dia hanao sidina voalohany. Mpiandraikitra teknika fiarovana amin'ny Baykar Selçuk Bayraktar Akıncı [More ...]
Ny lamasin-karate nitondra entana vita amin'ny plastika avy any Gaziantep mankany Çorlu dia namita ny fandalovany tamin'ny alàlan'i Marmaray tamin'ny fandraisana anjaran'ny minisitra Karaismailoğlu. Minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Adil Karaismailoğlu, entana voalohany an-trano hiampitana an'i Marmaray amin'ny 08.05.2020 [More ...]
Fandraharahana fiaramanidina faharoa faharoa TCG TRAKYA Hatao rehefa mitaky
Filohan'ny indostrian'ny fiarovana Tiorka. Dr. İsmail Demir, mpiasam-panjakana SSB IanaoTube Namaly fanontaniana tamin'ny alàlan'ny fantsona izy. Tamin'ny lahateniny, izay nanombohan'i İsmail Demir ny toe-javatra ankapobeny teo amin'ny sehatra, ny LHD faharoa dia mifandray amin'ny TCG TRAKYA. [More ...]
Bayraktar TB2 SİHA dia natolotra ny Komandin'ny zandarimaria
Vokatra 3 avy amin'ny Baykar Defense Defense Bayraktar TB2 SİHA dia natolotra ny Komandin'ny Gendarmerie General. Ny filohan'ny indostrian'ny fiarovana İsmail Demir dia nanambara ny fandefasana tamin'ny alàlan'ny kaontiny media sosialy. Demir nizara: "3 Bayraktar TB2 amin'ny baikoan'ny zandarimaria [More ...]
ASELSAN sy KOUSTECH Nahatonga karatra fizarana hery ho an'ny UAV
KOUSTECH dia namolavola "Rafitra fanaparitahana ny herinaratra" miaraka amin'ny fanohanan'ny injeniera ASELSAN ho ampiasaina amin'ny fiara fiaramanidina tsy manam-paharoa izay novolavolainy. KOUSTECH, ekipa University of Autonomous Systems Technologies an'i Kocaeli University dia manana ekipa 22 mpianatra injeniera. [More ...]
Tany India, ny lamasinina namely ny mpiasan'ny mandeha an-dalamby ..! Mpiasa 16 no namoy ny ainy
Tany India, ireo mpiasa mpifindra monina, izay nihevitra fa tsy misy ny kodiarana vokatry ny arabe vokatry ny areti-kena coronavirus, dia nitondra loza teny an-dalana hody any an-tranony amin'ny alàlan'ny fandehanana amin'ny lalan'ny lamasinina aorian'ny asa. Mitohy ny curfew any India, Maharashtra [More ...]
72 Mey ho an'ny mpiasa amin'ny alàlan'ny metatra 1 metatra avy ao amin'ny Kıraç
Ny governemantan'i Istanbul dia nikarakara fampirantiana manokana Kıraç ho an'ny Andro 1 laboratoara sy firaisankina. Nalefa mivantana tamin'ny radio sy fahitalavitra ary kaonty media sosialy ny fampisehoana. Manokana ny andro 1 Mey ho an'ny laboratoara sy ny firaisankina [More ...]
Fifaninanana nasionaly fiaramanidina fiaramanidina fiaramanidina mpiady eo anelanelan'ny TUSAŞ sy HAVELSAN
Filohan'ny indostrian'ny fiarovana ny filoham-pirenena. Dr. Signedsmail Demir dia nanao sonia fiaraha-miasa eo amin'ny Tiorka avaratra sy ny indostrian'ny habakabaka (TUSAŞ) sy HAVELSAN, izay manatanteraka fivoarana sy famokarana ho an'ny National Combat Aircraft (MMU) [More ...]